Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कलंकी नागढुंगा सडक खण्डमा सर्बसाधारणले हैरानी ब्यहोर्नुु परेको ४ बर्ष – Emountain TV
कलंकी नागढुंगा सडक खण्डमा सर्बसाधारणले हैरानी ब्यहोर्नुु परेको ४ बर्ष
काठमाडौं, २५ साउन । कलंकी नागढुंगा सडक खण्डमा सर्बसाधारणले हैरानी ब्यहोर्नुु परेको ४ बर्ष भैसकेको छ । सडक बिग्रिदा स्थानीय मात्र हैन ब्यापारी,सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले दिनहु सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
मन्त्रीले सडकको निरीक्षण पनि गरे तर समस्या ज्यूकात्यू छ । कलंकी नागढुुगा सडक राजधानी प्रवेश गर्ने र राजधानीबाट बाहिरका जिल्ला जान प्रयोग हुने मुख्य राजमार्ग हो । तर, त्यही राजमार्ग चार वर्षदेखि बिग्रदा स्थानीय, ब्यापारी सवारी साधन र सवारी साधनमा यात्रा गर्नैले हैरानी ब्यहोर्नुु परेको छ । घाम लाग्दा धुलोको मुस्लो र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने यो सडकको अवस्थाले सबैजनाले हैरानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
प्रंधानमन्त्रीले सडकको खाल्डाखुल्डी पूर्न निर्देशन दिएपछि दुुइहप्ता अघि सडकको अवस्था अवलोकन गर्न पुगेका भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेले सडक चाँडै बनाउने आश्वाशन दिएका थिए । मन्त्री आस्वासन दिएर फर्किएपछि आफ्नै नियमित काममा व्यस्त छन् । तर, सडकको अवस्था अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । त्यसैले पनि होला त्यही वेला स्थानीयले मन्त्रीको आश्वासन कार्यान्वयन हुनेमा आसंका प्रकट गरेका थिए । उनीहरुको असंका सहि र मन्त्रीको आश्वासन आश्वासनमा सिमित भएको छ ।
घाम लाग्दा धूलोको मुस्लो अनि पानी परेपछि हिलोमा गाडीने खतरा, त्यसमाथि पटयारलाग्दो जामले त्यहाँ पुगेको जो कोही निशास्एिर फर्कने गर्छन् । तर यही ९ किलोमिटर पार गर्न १ देखि साढे १ घण्टासम्म लाग्छ । लामै जाम परेका बेला त कहिलेकाहिँ ९ घण्टा समेत लाग्छ । स्थानीयको दैनिकी समेत बाटोको समस्या र जामका कारण प्रभावित हुने गरेको छ । मन्त्री रघुवीर महासेठले भदौ १२ गतेसम्म सडक कालोपत्रे गरिसक्न निर्देशन दिएर नसके कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका थिए । अव हेर्नुछ भदौ १२ सम्म सडक कालोपत्रे हुन्छ वा जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरु कारवाहीमा पर्नेछन् ।